China Kids Jerseys Scrimmage Training Vests Football Vest Mesh Breathable Bibs for Volleyball Soccer Basketball mpamokatra sy mpamatsy | RE-HUO
Volavola manokana: Banga izany - mba hahafahanao manavaka manokana
Namboarina tamin'ny 100% polyesterère mercerization miaraka amina valahana elastika roa. Mora apetraka ary esorina.
Ity ny tabilao habe izay tahirizinay, azonay atao koa ny manamboatra ny habeny ho anao.
Color: Azontsika atao ny manamboatra ny loko, tsy mila manome ny laharana loko Pantone ilainao fotsiny ianao, fa manana laharana farafahakeliny fividianana loko namboarina.
Famantarana: Manana fomba fanontana isan-karazany izahay: efijery
fanontana, pirinty famindrana hafanana, fanontana sublimation loko, amboradara sns.
Previous: Olon-dehibe - ekipa jadim-panatanjahan-tena momba ny Scrimsage an'ny zatovo Pinnies Sports Vest Soccer, Football, baibolin'ny Basketball
Manaraka: Fiofanana Bibs ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy afaka miaina haingana fanamainana baolina kitra Pinnies Football ekipa ekipa mpilalao baolina kitra ho an'ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena